Canada oo ka digtay dab dib u soo labo kacleeyay - BBC News Somali
Canada oo ka digtay dab dib u soo labo kacleeyay
Image caption dabka Canada ka kacay
Qiyaastii 12,000 oo qof ayaa loo sheegay inay ka tagaan ceelka saliidda laga qodo ee Sands Camps ee u dhow magaaladii dabku qabsaday ee Fort McMurray, maadaama dabkii oo dib u huray usoo durkayo xagooda.
Sarkaal heer gobol ah ayaa BBC-da u sheegay in 8,000 oo qof lagu amray inay ugu dambayn fiidkii maalintii Isniinta ka baxaan goobta, 4,000 oo kalena la ogaysiiyay inay ka baxaan meesha.
Ku dhawaad 2,400 oo dhisme ayaa dabku baabi’iyay, in ka badan 80,000 oo qofna way ka qaxeen magaalada Fort McMurray labadii todobaad ee la soo dhaafay markii dabku qabsaday magaalada.
Shaqaale ka shaqeeya qodidda saliidda ayaa dib ugu soo noqday goobahii ay ka shaqaynayeen oo la soo noqday qalabkoodii si ay u bilaabaan soo saarka saliidda. Laakiin maalintii Isniinta waxaa lagu war geliyay in dabka oo daqiiqadiiba jaraya xawaare dhan 30-40 mitir xagooda u soo siqayo.